drone/UAV horumarinta kamaradaha khariidadeynta ee qarsoon - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Shirkad teknoolojiyad sare ah, oo xoogga saarta sawir-qaadista, waxay sii waddaa inay hal abuur yeelato.
Soo ogow taariikhda shirkaddayada iyo dadka ka dambeeya.
Aynu dib u soo celino wakhtiga 2011, nin hadda ka soo qalin jabiyay shahaadada Masterka ee Jaamacadda Southwest Jiaotong, ayaa xiiso weyn u leh moodooyinka aan duuliyaha lahayn.
Waxa uu daabacay maqaal lagu magacaabo "Stability of Multi-Axis UAVs", kaas oo soo jiitay dareenka macalin jaamacadeed oo caan ah. Professor-ku wuxuu go'aansaday inuu maalgeliyo cilmi-baaristiisa ku saabsan waxqabadka drones-ka iyo codsiyada, mana uusan niyad-jabin borofisar.
Waqtigaas, mawduuca "Smart City" ayaa horeyba ugu kululaa Shiinaha. Dadku waxay dhisteen qaababka 3D ee dhismayaal inta badan waxay ku tiirsan yihiin helikobtero waaweyn oo leh kamarado khariidad heer sare ah (sida wejiga koowaad XT iyo XF).
Isku-dhafkan wuxuu leeyahay laba cilladood:
1. Qiimuhu aad buu qaali u yahay.
2. Waxaa jira xayiraadyo badan oo duulimaad ah.
Horumarka degdega ah ee tignoolajiyada aan duuliyaha lahayn, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee warshadaha ayaa keenay koritaanka qarxa 2015, dadkuna waxay bilaabeen inay sahamiyaan codsiyada kala duwan ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, oo ay ku jiraan tignoolajiyada "sawir-qaadista".
Sawir qaadashadu waa nooc ka mid ah sawir qaadista hawada kaas oo dhidibka kamarada si ula kac ah looga ilaaliyo xagal go'an. Sawirrada, sidaas la qaaday, waxay muujinayaan faahfaahinta la daboolay siyaalo qaarkood sawiro toosan.
Sannadkii 2015, ninkani waxa uu la kulmay nin kale oo sannado badan soo urursaday waayo-aragnimada sahanka iyo khariidaynta, sidaa darteed waxa ay go’aansadeen in ay iska kaashadaan shirkad ku takhasustay sawir-qaadista, oo lagu magacaabo RAINPOO.
Waxay go'aansadeen inay soo saaraan kamarad shan-lens ah oo fudud oo yar oo ku filan in lagu qaado diyaaradda aan duuliyaha lahayn, marka hore waxay si fudud isugu geeyeen shanta SONY A6000, laakiin waxaa soo baxday in isdhexgalka noocaas ahi uusan gaari karin natiijooyin wanaagsan, weli waa mid aad u culus. oo laguma qaadi karo diyaaradda aan duuliyaha lahayn si ay u fuliso hawlo khariidad oo sax ah.
Waxay go'aansadeen inay jidka hal-abuurka ka bilaabaan hoosta. Kadib markii ay heshiis la gaareen SONY, waxay adeegsadeen cmos-ka Sony si ay u horumariyaan lenskooda indhaha, muraayadani waa inay buuxisaa heerarka sahaminta iyo warshadaha khariidadaha.
Riy-D2: aduunkas kamarad feedh ah oo ku jirta 1000g (850g) , lens indhaha si gaar ah loogu sameeyay sahaminta iyo samaynta.
Tani waxay noqotay guul weyn. Kaliya 2015, waxay iibiyeen in ka badan 200 oo unug oo D2 ah. Intooda badan waxaa lagu qaaday dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee rotor-ka badan ee loogu talagalay hawlaha qaabaynta 3D ee aagga yar. Si kastaba ha ahaatee, baaxad weyn oo leh dhismayaal sare oo 3D hawlo qaabayn ah, D2 wali ma dhamaystiri karto.
2016, DG3 waxa uu dhashay. Marka la barbar dhigo D2, DG3 waxay noqotay mid fudud oo yar, oo dhererkeedu dheer yahay, wakhtiga ugu yar ee soo-gaadhista waa 0.8s oo keliya, oo leh boodhka ka-saarista iyo kuleylka kuleylka aagga 3D hawlaha qaabaynta.
Mar labaad, Roobabku waxa ay horseedday isbeddelka dhinaca sahaminta iyo samaynta.
Riy-DG3: culeyska 650g, dhererka focal 28/40 mm, waqtiga ugu yar ee soo-gaadhista waa 0.8s oo keliya.
Si kastaba ha ahaatee, meelaha dhaadheer ee magaalooyinka, qaabaynta 3D wali waa hawl aad u adag. Si ka duwan shuruudaha saxsanaanta sare ee goobta sahaminta iyo khariidaynta, meelo badan oo codsi ah sida magaalooyinka smart, goobaha GIS, iyo BIM waxay u baahan yihiin moodooyin 3D oo tayo sare leh.
Si loo xaliyo dhibaatooyinkan, waa in la buuxiyaa ugu yaraan saddex qodob:
1.Dheer foocal dheer.
3. Muddada gaadhista oo gaaban.
Dhawr jeer oo dib-u-cusbooneysiin alaab ah kadib, 2019, DG4Pros ayaa dhashay.
Waa kamarad qaabaysan oo buuxa gaar ahaan qaabaynta 3D ee meelaha dhaadheer ee magaalooyinka, oo leh 210MP wadarta pixels, iyo dhererka 40/60mm, iyo 0.6s soo-gaadhista waqtiga-dhexe.
Riy-DG4Pros: qaab buuxa, dhererka focal 40/60 mm, wakhtiga ugu yar ee soo-gaadhista waa 0.6s oo keliya.
Waa kamarad qaabaysan oo buuxa oo khaas ah oo loogu talagalay qaabaynta 3D ee meelaha sare ee magaalooyinka, oo leh 210MP wadarta pixels, iyo 40/60mm dhererka focal, iyo 0.6s soo-gaadhista waqtiga-dhexe.
Halkaa marka ay marayso, nidaamka wax soo saarka ee Rainpoo wuxuu ahaa mid aad u qumman, laakiin dariiqa hal-abuurka ee nimankan ma joogsan.
Had iyo jeer waxay rabaan inay naftooda dhaafaan, wayna sameeyeen.
Sannadka 2020, waxaa dhashay hal nooc oo kamarad khariban ah oo ka leexisa aragtida dadka - DG3mini.
Miisaanka 350g, cabbirada69 * 74*64, wakhtiga ugu yar ee soo-gaadhista 0.4s, waxqabadka weyn iyo xasilloonida……
Laga soo bilaabo koox ka kooban laba wiil oo keliya, ilaa shirkad caalami ah oo leh 120+ shaqaale ah iyo 50+ qaybiyayaal iyo la-hawlgalayaasheeda adduunka oo dhan, waa sababta saxda ah ee loogu talagalay "hal-abuurka" iyo raadinta tayada badeecada ee ka dhigaysa Rainpoo si joogto ah. koraya
Kani waa Roobab, sheekadeenuna way sii socotaa......